संविधान दिवसका अवसरमा भारतसहित २४ मुलुकले दिए शुभकामना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संविधान दिवसका अवसरमा भारतसहित २४ मुलुकले दिए शुभकामना
काठमाडौँ — छिमेकी भारत र चीनसहित दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकले संविधान दिवसका अवसरमा नेपाललाई शुभकामना दिएका छन् । ती देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाएका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएदेखि असन्तुष्ट भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षीलाई शुभकामना पठाएका हुन् । राष्ट्रपति कोविन्दले भारत सरकार, भारतीय जनता र आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई शुभकामना दिएका छन् । उनले पठाएको सन्देशमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पारिवारिक सम्पर्कले चिनिएको भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध दीर्घकालीन रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
नेपालले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले करिब चार महिना आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई पठाएको सन्देशमा संस्कृतिको सुदृढ सूत्र, पारस्परिक सम्पर्क र जनता–जनताबीचको सम्बन्धले दुई देशलाई जोडेको जनाएका छन् । मोदीले प्रधानमन्त्री देउवा र समस्त स्नेहशील नेपाली जनताको सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि शुभकामना पठाएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र प्रगतिको कामना गरेका छन् । बाइडेनले कोभिड–१९ को महामारी र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका संकटको सामनाका साथै आर्थिक सम्बन्ध सुधार उल्लेख गरेका छन् ।
बंगलादेश, श्रीलंका, रुस, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगल, बेलायत, जापान, म्यानमार, लाओसलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकले शुभकामना पठाएको परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०६:३१
आश्विन ४, २०७८ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — आइतबार देशभरि ७ सय ३४ जना संक्रमित हुँदा २० वर्षमुनिका ७९ जना छन् । तीमध्ये १० वर्षमुनिका १४ जना छन् । आइतबार कुल संक्रमितमा १०.७६ प्रतिशत बालबालिका छन् । यो संख्या शनिबार ९.६६ प्रतिशत थियो ।
‘देशभरिमा देखिएका संक्रमितमध्ये सरदर ९ प्रतिशत बालबालिका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘यो तथ्यांकले जोखिममा बालबालिका नै रहेको देखिन्छ ।’ बालबालिकाको परीक्षण न्यून हुने भएकाले संक्रमितको संख्या यकिन नआउने उनले बताए । केही समयअघि भएको अध्ययनमा ५ वर्षसम्मका ५५ प्रतिशत र ५ देखि १४ वर्षसम्मका ५९ प्रतिशत बालबालिकालाई संक्रमण भएको पाइएको थियो ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको २०७८ वैशाख २८ मा २० वर्षमुनिका संक्रमित ९.८२ प्रतिशत मात्रै थिए । त्यस दिन ९ हजार ४ सय ८३ जनालाई कोरोना देखिँदा ९ सय ३२ जना बालबालिका थिए । आइतबार देखिएको संख्या वैशाख २८ को भन्दा बढी हो । ‘अरू समूहले खोप लगाए पनि बालबालिकाले लगाउन नपाएकाले उनीहरू जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्,’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भने, ‘बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पुस, माघसम्म खोप आउन सक्छ ।’
१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ५० लाख बालबालिकालाई खोप सुनिश्चित भएको बताए पनि कहिले आउने र कहिले लगाउने भन्ने सरकारसँग जवाफ छैन । सरकारले बालबालिकाका लागि अमेरिकामा उत्पादन भएको ६० लाख फाइजर र ४० लाख मोडर्ना खोप ल्याउन लागेको जनाएको छ । ‘मोडर्ना ल्याउन त पैसासमेत पठाइसकेका छौं, फाइजर खरिदको अन्तिममा चरणमा छ,’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी १८ वर्षमुनिका ६३ हजार २ सय ६१ जना बालबालिका संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । पहिलो लहरमा २१ हजार ५ सय २३ जना संक्रमित भएकामा दोस्रो लहरमा ४१ हजार ७ सय ३८ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ७७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् ।
‘रेड जोन’ मा विद्यालय खोल्न अनुमति
बालबालिका संक्रमित हुने दर बढिरहेका बेला काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका ठूला सहरमा स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न अनुमति दिन थालेका छन् । संक्रमण उच्च रहेका ११ जिल्लालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै ‘रेड जोन’ मै राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मोरङ, सुनसरी, झापा, कास्की, रूपन्देही र सुर्खेत जिल्ला अझै पनि ‘रेड जोन’ मै छन् । ‘रेड जोनमा त विद्यालय सञ्चालन गर्नै सकिँदैन,’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जहाँ संक्रमण छैन, त्यहाँ स्थानीय तहले विश्लेषण गरी खोल्न सकिन्छ ।’
पाँच दिनअघि सीसीएमसीका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीच विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जोखिम भएको ठाउँमा खोल्न नहुनेमा एकमत देखिएको स्रोतले जनाएको छ । संक्रमणको विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । बालबालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले पाउने भन्ने निश्चित नभए पनि संक्रमणको जोखिम रहेका जिल्लामा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि जिल्लालाई ‘ग्रिन जोन’ मा राखेको छैन ।
काठमाडौं रेड जोनमा भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा वडा तहबाट अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन सुरु भइसकेको छ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने तत्काल विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । ‘अर्को आदेश नभएसम्म लागू हुने गरी असोज १ देखि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न/गराउन पाइने छैन, गर्नैपर्ने भएमा महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नॅपूर्व आ–आफ्नो पालिकास्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरेर शिक्षक र कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्नेछ,’ प्रशासनको आदेशमा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाअनुसार स्थानीय तह, जिल्लाको संक्रमण अवस्थाका आधारमा शैक्षिक संस्था कस्तो अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा बनाएर पठाइसकेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी सीसीएमसीले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा लकडाउनलाई रेड, एम्बर, एल्लो र ग्रिन गरी चार भागमा विभाजन गरेको छ । ‘रेड र एम्बर क्षेत्रमा कक्षा लगाउनै मिल्दैन, एल्लो र ग्रिनमा भने विभिन्न मोडलमा कक्षा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन जिल्ला र स्थानीय तह कुन लेभलमा छ भन्ने जिम्मेवारी जिल्लाको डीसीएमसीलाई छ । यो कामचाहिँ गरिदिनुपर्‍यो ।’
डीसीएमसीले निर्धारण गरेको संक्रमणको तहअनुसार एल्लो जोन हुँदा भौतिक दूरी कायम गरी सानो समूहमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर गृहकार्य दिने, सिफ्टका आधारमा र आलापालो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । डीसीएमसीले ग्रिन जोन तोकेको क्षेत्रमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विभिन्न ढाँचामा कक्षा चलाउन सकिने उनले बताए । ‘रेड र एम्बर जोनमा परेका क्षेत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट मात्रै पठनपाठन गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न सात मोडल
संक्रमणको जोखिमका आधारमा सरकारले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विज्ञहरूले विद्यालय सञ्चालनको अनेक मोडल सुझाएका छन् ।
संक्रमण जोखिम न्यून भएका बेला सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने, अलग समय (सिफ्ट) मा अलग कक्षा वा तहका विद्यार्थी बोलाएर कक्षा चलाउन सकिने, विद्यालय खुल्ने तर कक्षा सञ्चालन अवधिको घन्टी छोट्याउने, तल्लो र माथिल्लो तहका कक्षालाई अघि–पछि गरेर चलाउन सकिने, कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो सञ्चालन गर्न सकिने, विद्यार्थीलाई जोरबिजोर गरी सिफ्ट मोडलमा पनि कक्षा चलाउन सकिने र सातामा केही दिन वा दिनमा केही घण्टा मात्रै सञ्चालन गर्ने विकल्प अपनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिँदा स्थानीय तहले विद्यालयमा पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने, हात धुने, खोकी लाग्दा वा हाच्छिउँ आउँदा मुख छोप्ने, साथीहरूबीच टाँसिएर नबस्ने, पेन्सिल, कलम आपसमा नसाट्नेजस्ता नियमको जानकारीका बारेमा विद्यार्थीलाई सचेतना गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘यसबाहेक साधन हुनेलाई घरमा र साधन नहुनेलाई विद्यालयमा बोलाएर पनि कक्षा चलाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । कक्षा सञ्चालन गर्दा संक्रमण देखिएका विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा आउन नसक्ने भएमा वैकल्पिक विधि र सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने उनले बताए । संक्रमणको जोखिम अवधिभर सामूहिक क्रियाकलापमा कम प्राथमिकता दिने, प्रार्थना, समूह खेल गराउन नहुने उनले बताए ।
‘विद्यालय खोल्दा मापदण्ड पालना गराउने अनुगमन संयन्त्र खोइ ?’
डा. विन्ज्वला श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य विज्ञ
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, जनस्वास्थ्य विभाग
पहिला मापदण्ड पालना गर्ने भनेर विद्यालय खोले पनि कोरोना नभएकै जसरी चल्यो । संक्रमण बढेकै कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्‍यो । त्यस बेला भेरिएन्ट कमजोर थियो । अहिले भेरिएन्ट पनि बदलिएको छ । संक्रमण बढेपछि अमेरिका, इजरायल, बेलायतमा पनि पठनपाठन बन्द भइसक्यो । शैक्षिक संस्था खोल्दा संक्रमण बढ्न सक्छ । संक्रमण बढ्छ भनेर कहिलेसम्म बन्द गर्ने ?
मोबाइल र अन्य उपकरणको स्क्रिनमा हेरेर मात्रै पढिरहेका छन् । साथीसँग घुलमिल पनि हुन पाएका छैनन् । जसले गर्दा बौद्धिक र मानसिक रूपमा विकासमा असर गर्ने भयो । विद्यालय खोल्दा अभिभावकलार्ई पनि खोप अनिवार्य गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा जसका बालबालिका आउँछन् उसका आमाबुबा र परिवारका सदस्यलाई पनि अनिवार्य खोप लगाउन सकियो भने अलि सुरक्षित हुन सक्छन् । शिक्षक, कर्मचारीहरूले खोप लगाइसकेकाले अब अभिभावकलाई अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि खोप नलगाउनेले पनि छोराछोरीका लागि भनेपछि लगाउन सक्छन् । विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले माक्स अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका बेला कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्र हुनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुगमन टिम बनायो भने राम्रो हुन्छ । अनुगमन टोली बनायो भने विद्यालयले गरेको गल्ती पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।
पहिला मापदण्ड पालना गर्ने भनेर विद्यालय खोले पनि कोरोना नभएकै जसरी चल्यो । संक्रमण बढेकै कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्‍यो । त्यस बेला भेरिएन्ट कमजोर थियो । अहिले भेरिएन्ट पनि बदलिएको छ ।
संक्रमण बढेपछि अमेरिका, इजरायल, बेलायतमा पनि पठनपाठन बन्द भइसक्यो । शैक्षिक संस्था खोल्दा संक्रमण बढ्न सक्छ । संक्रमण बढ्छ भनेर कहिलेसम्म बन्द गर्ने ?
मोबाइल र अन्य उपकरणको स्क्रिनमा हेरेर मात्रै पढिरहेका छन् । साथीसँग घुलमिल पनि हुन पाएका छैनन् । जसले गर्दा बौद्धिक र मानसिक रूपमा विकासमा असर गर्ने भयो । विद्यालय खोल्दा अभिभावकलार्ई पनि खोप अनिवार्य गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा जसका बालबालिका आउँछन् उसका आमाबुबा र परिवारका सदस्यलाई पनि अनिवार्य खोप लगाउन सकियो भने अलि सुरक्षित हुन सक्छन् । शिक्षक, कर्मचारीहरूले खोप लगाइसकेकाले अब अभिभावकलाई अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि खोप नलगाउनेले पनि छोराछोरीका लागि भनेपछि लगाउन सक्छन् ।
विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले माक्स अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका बेला कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्र हुनुपर्छ । स्थानीय तहले अनुगमन टिम बनायो भने राम्रो हुन्छ । अनुगमन टोली बनायो भने विद्यालयले गरेको गल्ती पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय खोल्दा के गर्ने ?
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त गरी विद्यालयमा प्रवेश गर्ने बालबालिका, शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैको ज्वरो परीक्षण गर्ने
विद्यालयमा सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने
विद्यार्थीलाई मास्कको प्रयोग उचित तरिकाले लगाउन सिकाउने
अति विपन्न समुदायका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहयोगमा विद्यालयले मास्कको व्यवस्था गर्ने
विद्यालय परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई विद्यालय परिसरमा आउन निषेध गर्ने
विद्यालयमा कोरोनाबाट बच्न छुट्टै आचारसंहिता बनाएर टाँस्ने
विद्यालयमा एक जना शिक्षक (स्वास्थ्य शिक्षा वा विज्ञान विषय शिक्षण गराउने शिक्षक) लाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने
विद्यार्थी संख्याका आधारमा पर्याप्त मात्रामा सफा पानी, हात धुने स्थान, साबुन र अन्य सरसफाइ सामग्रीको व्यवस्थासहित नियमित रूपमा हातधुने व्यवस्था गर्ने
विद्यालय सञ्चालनका समयमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यार्थीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या वा संक्रमणको लक्षण देखिएमा तत्काल राख्नका लागि आइसोलेसन कक्षको प्रयोग गर्ने उनीहरूलाई अभिभावक तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका विद्यार्थीलाई स्वस्थ नभएसम्म विद्यालयमा नआउन सूचित गर्ने
विद्यालयमा बालबालिकाबीचको न्यूनतम १ मिटरको भौतिक दूरी कायम हुने गरी कक्षाकोठामा दैनिक विद्यार्थीहरूको बसाइ व्यवस्थापन गर्ने
एउटा कक्षा वा सेक्सनका विद्यार्थीहरूलाई सधैं एउटै समूह वा कक्षामा राख्ने
कक्षाकोठाका झ्यालढोका खुला राखी पर्याप्त हावा आवतजावत गर्न सक्ने बनाउने
विद्यालय स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्ने
छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड र छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्ने एवं शौचालयलाई दैनिक निर्मलीकरण गर्ने
खाजा खानका लागि कक्षाहरूलाई फरकफरक समयमा छुट्टी दिने, खाना बाँडेर नखाने, कक्षाकोठाभित्र खाना–खाजा नखाने
दिवा खाजा खुवाउनुपर्ने बालबालिकाका लागि उनीहरूको पोषण तथा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी दिवा खाजा व्यवस्थापन तथा सहजीकरण पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसारको न्यूनतम पोषक तत्त्वहरूसहित खाजा विद्यालयमै व्यवस्था गर्ने
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०६:११